पाथिभरा माता रक्षा गरुन् ! हेर्नुहोस् यस्तो छ, असार ९ गते बुधबारको तपाईको भाग्य !!
वृषः शैक्षिक तथा धार्मिक यात्रा हुने भएपनि यात्राको क्रममा कष्टको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ध्यान दिनुहाला । समाजमा राम्रा काम गर्दागदै प्रतिस्पर्धीहरुले खुट्टा ता न्ने छन् । खोजीमुलक क्षेत्रमा नतिजा हात पार्नको लागि बढी नै खट्नु पर्नेछ । अग्रज तथा धार्मिक क्षेत्रमा मानिससँग बिवाद हुनसक्छ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समय मध्ययम रहेको छ ।
मिथुनः अध्ययनमा मन जाने तथा अध्ययकै सवालमा प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिनछ । व्यापार व्यवसायमा अरु दिन भन्दा सधार भएर जाने तथा केही मात्रामा आम्दानी गर्न सकिनेछ । नसोचेका तथा लामो समय देखि रोकिएर बसेका कामहरु सम्पादन गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा घरपरिवारका मानिसबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । माया गर्नेहरुका लागि समय उत्तम रहेको छ ।
धनुः कुटुम्ब तथा आफन्तसँग घरायसि कुरामा राय बाजिनेछ । व्यापारमा मन्दी आउनेछ । प्रेममा अविस्वास सिर्जना हुनेछ । गीत संगीतको क्षेत्रमा लाग्नेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ । बोल्ने कुरामा ध्यान नजादा आलोचनाको शिकार होईनेछ । कार्यक्षेत्रमा कुरा का ट्ने तथा खुट्टा तान्नेहरु सक्रिय हुनेछन् । खानपानमा ध्यान दिनुहोला समय मध्यम रहेको छ ।
मकरः व्यापारमा लागानी गरी मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । आर्थिक पक्ष मजबुत रहनेछ भने आर्थिक वृद्धिका लागि नयाँ अवसरहरु प्राप्त हुनेछन् । विद्यार्थीहरुका लागि आजको समय उत्तम रहेकोले नतीजा आफैँतिर ल्याउन सकिनेछ । आफन्त तथा परिवारका साथ रमाईलो यात्रा गर्दै मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । प्रणय सम्बन्धमा सुधारको संकेत देखिनेछ । दैनिक समस्याहरु सुल्झाउँदै बढ्न सकिनेछ ।